के तपाईको ट्वाइलेटमा बस्दा मोबाइल चलाउने बानी छ ? सावधान ! स्वास्थ्यकालागि खतरनाक – Khabar Aajako
के तपाईको ट्वाइलेटमा बस्दा मोबाइल चलाउने बानी छ ? सावधान ! स्वास्थ्यकालागि खतरनाक
आजको खबर | प्रकाशित : २०७५ असोज १६ गते १५:२९
एजेन्सी । प्रविधिको यो युगमा मोबाइल बिना मानिस एक मिनेट पनि बस्न नसक्ने भैसकेका छन् । ट्वाइलेट वा बाथरुममा हुँदा फोन प्रयोग गर्ने धेरैको बानी हुन्छ । यदि तपाईमा पनि यस्तै बानी छ भने त्यो बानी त्याग्नुहोस् । ट्वाइलेटमा बसेका बेला मोबाईल चलाउनु स्वास्थ्यकालागि खतरनाक साबित हुनसक्छ । यस्तो बानीले मृत्यु पनि हुनसक्छ।
ट्वाइलेटमा राखिएको ‘पेपर होल्डर’मा सबैभन्दा बढी किटाणु बसेका हुन्छन् । धेरै जसोले आफ्नो फोन त्यही ‘पेपर होल्डर’मा राख्ने गर्छन् । जसका कारण इ–कोइल, सालमोनेला, सि–डिफिसाइलजस्ता ब्याक्टेरिया फोनमा सल्किन्छ। अनि त्यहि फोन हामी दिनभर हातले समात्छौँ, त्यहि हातले खाने कुरा खान्छौं। यति गर्दा पनि ट्वाइलेटमा फोन बिना बस्नै सक्नुहुन्न भने, ‘स्पिरिट’ ले फोनलाई बारम्बार सफा गर्नुहोस् ।
२०७५ असोज १६ गते १५:२९ मा प्रकाशित
के तपाइको आखा वरिपरि ‘डार्क सर्कल’ छ ? खानुहाेस् यस्ता खानेकुरा !
यी हुन १० हजार पुरुषसँग यौनसम्पर्क गरेकी महिला (फोटो फिचर)
यी हुन मलेसियामा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ज्यान गुमाएका ६ नेपाली(नाम र ठेगानासहित)
छ विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान हुँदै
राष्ट्रप्रति केन्द्रित परराष्ट्रनीति अबको आवश्यकता : अध्यक्ष दाहाल
यसरी पक्राउ परिन् युवालाई क्यानडा पठाइदिने भन्दै १ करोड ३७ लाख ठग्ने महिला